Atambatra izay mampiombona… | NewsMada
Atambatra izay mampiombona…
Par Taratra sur 18/03/2020
Ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Samy hafa na tsy mitovy sady samihafa na misy karazany ny olombelona: natao hifameno fa tsy hifamono. Na izany aza, aleo, hono, miara-monina miady toy izay mitoka-monina any Ankaratra.
Ny vy tsy mikitrana irery. Matoa tsy mifankahazo na miady izay iray toerana, misy tsy itoviana ao: toetra, fijery, fiasa, fomba… Ndeha hampiady izany fa tsy hifamenoana? Harembe ny fahasamihafana amin’ny fiaraha-mitoetra sy fiaraha-monina.
Amin’izao firongatry ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus saika maneran-tany izao, mby aiza izay hoe fifamenoana fa tsy fifamonoana izay? Misy ny mampiombona sy iombonana: fiatrehana ny fahavalo iraisana, ny fiarovana ny tanindrazana…
Amin’izany rehetra izany, mila avela ary tsy maintsy ampandeferina izay mety ho fahasamihafana rehetra na mampisara-kevitra an-toerana. Na inona na inona izay, na amin’iza na iza, na aiza na aiza, na rahoviana na rahoviana… Nahoana?
Mila atrehin’ny mpiray tanindrazana ny fahavalo iombonana amin’izao. Tsy maintsy mampitovy fijery sy manambatra hery, ohatra, ny iray trano, raha misy fahavalo manafika. Izay no mampiombona, na miady an-toerana toy inona aza.
Amin’izao firongatry ny fihanaky ny valanaretina Conoravirus izao, efa samy miaro tena sy samy maka ho azy ny isam-pirenena. Eny, na iraisana aza ny fifaninanana amin’ny fitadiavana izay fanafody fanafana sy ny vaksiny fiarovana.
Amin’izao fotoana sy lalan-tsarotra diavin’ny zanak’olombelona saika maneran-tany izao àry, mila miray hina sy manambatra hery ny isam-pirenena. Avela ho azy amin’izany ny adihevitra tsy ahombiazana sy mampifanditra an-toerana.
Anisan’ny adilahy politika ny fihalangalanana na ny fitazanam-potsiny, ny fiheveran-tena ho hafa na tsy tompon’andraikitra… Misy olona tsy ilaina rehefa mby amin’ny toe-javatra sy fotoan-tsarotra? Tena mila atambatra izay mampiombona…